Maleeshiyada Al-Shabaab oo weli haysata deegaanka Af Urur iyo masuuliyiinta Puntland oo aan ka hadlin - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyada Al-Shabaab oo weli haysata deegaanka Af Urur iyo masuuliyiinta Puntland oo aan ka hadlin
June 9, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Deegaanka Af Urur. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli haysata deegaanka Af Urur ee gobolka Bari, sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Maleeshiyada ayaa magaalada la wareegtay subaxnimadii hore ee Sabtida kadib markii ay ciidaamada Puntland isaga baxeen maalin kahor.
Lama oga sababta dhabta ah ee keentay ka bixitaanka ciidamada Puntland, balse ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan ayaa warbaahinta u sheegay in ay tahay xeelad ciidan. Sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ka bixitaanka ay keentay tabasho mushahaar la’aan ciidamada ah.
Masuuliyiinta sare ee dowladda Puntland weli si rasmi ah ugama aysan hadlin qabsashada Al-Shabaab ee Af Urur.
Muxuu yahay deegaanka Af Urur?
Deegaanka Af Urur waxa uu kuyaala buuraleyda gobolka Bari, waa tuulo yar taasoo qiyaastii dhanka koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
Magaca ay Af Urur waxa aad loo bartay sanadkii 2017-kii markii maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Daraawiishta Puntland ku lahaayeen halkaas, kuna dileen qiyaastii 30 askari, sidoo kalena ku gubeen gaadiid dagaal ayna bililiqaysteen hubkii iyo saanadii ciidamada.
Markale bartamihii sanadkii 2018-kii Al-Shabaab ayaa la wareegtay Af Urur kadib markii ay ka baxeen ciidamada Puntland iyada oo xilligaas Puntland culeys dagaal uu ka heystay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo ay ku dagaalamayeen ciidamada maamulka Somaliland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirka wadatashiga Puntland oo ka socda magaalada Garoowe ayaa galay maalintiisii labaad. Maalintii kowaad ee shirka ayaa lagu soo bandhigay khudbado ay soo jeediyeen ka soo qeybgalayaasha. Shirka ayaa la sheegay in looga [...]